ClickTale wuxuu hormuud u ahaa warshadaha falanqaynta, iyadoo bixisa xogta habdhaqanka iyo muuqaal muuqaaleed oo gacan ka siiya ecommerce iyo xirfadleyda gorfeynta inay tilmaamaan oo ay hagaajiyaan arrimaha ku saabsan goobahooda. Tafatiraha Visual-ka cusub ee ClickTale ayaa bixiya horumar kale, oo leh habab koodh-la'aan ah oo isku-dhafan dhacdooyinka bartaada oo dhan. Kaliya farta cunsurkaaga oo qeex dhacdada… ClickTale ayaa sameeya inta hartay. Iyadoo la adeegsanayo Tifatiraha Muuqaalka, Clicktale waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee xal ka keena gudaha
Wareegga nolosha soo-saarista ololaha suuq-geynta, laga bilaabo fikirka fikradda iyo fidinta illaa wajiga horumarka illaa warbixinta ugu dambeysa, xaashida xogta, buug-yaraha, buugga, joornaalka ama wax kasta oo kale waa hawl daalin oo waqti badan qaadata. Sitecore, oo ah hoggaamiye suuq ku shaqeeya barnaamijka softiweerka ah ee maareynta maadooyinka internetka, ayaa soo saaray tiknoolajiyad cusub oo awood u leh inuu wax ka beddelo hannaanka daabacaadda. Sitecore's Adaptive Print Studio kaliya maahan inay siiso hay'adda wax wanaagsan